Jọshụa 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
24 Jọshụa wee kpọkọọ ebo niile nke Izrel na Shikem,+ kpọọkwa ndị okenye Izrel+ na ndị isi ha na ndị ikpe ha na ndị ndú ha, ha wee guzoro n’ihu ezi Chineke.+
2 Jọshụa wee sị mmadụ niile: “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, ‘Ọ bụ n’ofe Osimiri+ ka nna nna unu hà,+ bụ́ Tira nna Ebreham na nna Nehọ,+ biri n’oge dị anya gara aga. Ha na-efebukwa chi ọzọ.
3 “Ka oge na-aga, m si n’ofe Osimiri+ kpọrọ nna nna unu Ebreham+ wee mee ka o jegharịa n’ala Kenan dum, m mekwara ka mkpụrụ ya dị ọtụtụ.+ M wee nye ya Aịzik.+
4 M wee nye Aịzik Jekọb na Isọ.+ E mesịa, m nyere Isọ Ugwu Sia ka ọ bụrụ nke ya;+ Jekọb na ụmụ ya wee gbadaa Ijipt.+
5 E mesịa, m zipụrụ Mozis na Erọn,+ m wee tie Ijipt ihe otiti site n’ihe m mere n’ime ya;+ m wee kpọpụta unu.+
6 Mgbe m na-akpọpụta nna unu hà n’Ijipt,+ unu wee rute n’oké osimiri, ndị Ijipt wee jiri ụgbọ ịnyịnya agha na ndị agha ịnyịnya chụrụ+ nna unu hà rute n’Oké Osimiri Uhie.
7 Ha wee malite itiku Jehova.+ O wee tinye ọchịchịrị n’agbata unu na ndị Ijipt+ ma mee ka oké osimiri ahụ bịakwasị ha ma kpuchie ha,+ anya unu hụkwara ihe m mere n’Ijipt;+ unu wee biri n’ala ịkpa ruo ọtụtụ ụbọchị.+
8 “‘N’ikpeazụ, m kpọbatara unu n’ala ndị Amọraịt bụ́ ndị bi n’ofe Jọdan, ha wee buso unu agha.+ M wee nyefee ha n’aka unu ka unu weghara ala ha, m lakwara ha n’iyi n’ihu unu.+
9 Belak nwa Zipọ,+ bụ́ eze Moab, biliri wee buso Izrel agha.+ O wee gaa kpọta Belam nwa Biọ ka ọ kọchaa unu.+
10 Ma achọghị m ige Belam ntị.+ N’ihi ya, ọ gọziri unu ugboro ugboro.+ M wee napụta unu n’aka ya.+
11 “‘Unu wee gafee Jọdan+ bịarute Jeriko.+ Ndị nwe ala Jeriko, ndị Amọraịt na ndị Perizaịt na ndị Kenan na ndị Het na ndị Gegash, ndị Haịvaịt na ndị Jibọs malitere ibuso unu agha; ma m nyefere ha n’aka unu.+
12 M wee zipụ nkụda mmụọ ka o butere unu ụzọ, o wee chụpụ ha n’ihu unu,+ ya bụ, ndị eze abụọ nke ndị Amọraịt, ọ bụghị site ná mma agha unu ma ọ bụ ụta unu.+
13 Otú a ka m si nye unu ala unu na-adọgbughị onwe unu n’ọrụ maka ya nakwa obodo ndị unu na-ewughị,+ unu wee biri n’ime ha. Ọ bụ ubi vaịn na ubi oliv unu na-akụghị ka unu na-eri.’+
14 “Ugbu a, tụọnụ egwu Jehova,+ feekwanụ ya n’ụzọ na-enweghị ntụpọ nakwa n’eziokwu,+ wepụkwanụ chi niile nna nna unu hà fere n’ofe Osimiri nakwa n’Ijipt,+ feekwanụ Jehova ofufe.
15 Ugbu a, ọ bụrụ na ọ dị njọ n’anya unu ife Jehova, họrọnụ taa onye unu ga-efe,+ ma ọ̀ bụ chi niile nna nna unu hà, bụ́ ndị biri n’ofe Osimiri, fere+ ma ọ̀ bụ chi niile nke ndị Amọraịt unu bi n’ala ha.+ Ma mụ onwe m na ezinụlọ m, anyị ga-efe Jehova.”+
16 Mmadụ niile wee zaa, sị: “Tụfịakwa! Anyị agaghị ahapụ Jehova gaa fee chi ọzọ.
17 N’ihi na ọ bụ Jehova bụ́ Chineke anyị kpọpụtara anyị na nna anyị hà n’ala Ijipt,+ kpọpụta anyị n’ụlọ ndị ohu,+ ọ bụkwa ya mere oké ihe ịrịba ama ndị a n’ihu anyị,+ ọ bụkwa ya nọ na-eche anyị nche n’ebe niile anyị jegharịrị nakwa n’etiti ndị niile anyị si n’etiti ha gabiga.+
18 Jehova wee si n’ihu anyị chụpụ ndị ahụ niile,+ tinyere ndị Amọraịt, bụ́ ndị bi n’ala ahụ. Ma anyị onwe anyị, anyị ga-efe Jehova, n’ihi na ọ bụ Chineke anyị.”+
19 Jọshụa wee gwa mmadụ niile, sị: “Unu enweghị ike ife Jehova, n’ihi na ọ bụ Chineke dị nsọ;+ ọ bụ Chineke nke chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa.+ Ọ gaghị agbaghara nnupụisi unu na mmehie unu.+
20 Ọ bụrụ na unu ahapụ Jehova,+ wee fee chi mba ọzọ,+ ya onwe ya kwa ga-atụgharị mee unu ihe ọjọọ, kpochapụkwa unu mgbe o mesịịrị unu ihe ọma.”+
21 Mmadụ niile wee sị Jọshụa: “Ee e, kama ọ bụ Jehova ka anyị ga-efe!”+
22 Jọshụa wee sị ha: “Unu bụ ndị akaebe megide onwe unu+ na unu ejiriwo aka unu họrọ Jehova, ife ya ofufe.”+ Ha wee sị: “Anyị bụ ndị akaebe.”
23 “Wepụnụ chi mba ọzọ ndị dị n’etiti unu,+ meekwanụ ka obi unu dịrị n’ebe Jehova bụ́ Chineke Izrel nọ.”
24 Mmadụ niile wee sị Jọshụa: “Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke anyị ka anyị ga-efe, ọ bụkwa olu ya ka anyị ga-ege ntị!”+
25 Jọshụa na ndị Izrel wee gbaa ndụ n’ụbọchị ahụ, o nyekwara ha ụkpụrụ na mkpebi ikpe+ na Shikem.
26 Jọshụa wee dee okwu ndị a n’akwụkwọ iwu Chineke,+ werekwa nnukwu nkume+ guzobe n’ebe ahụ n’okpuru osisi gbara agba+ nke dị n’akụkụ ebe nsọ Jehova.
27 Jọshụa wee sị mmadụ niile: “Lee! Nkume a ga-abụ ihe akaebe megide anyị,+ n’ihi na ọ nụwo ihe niile Jehova gwara anyị, ọ ga-abụkwa ihe akaebe megide unu, ka unu ghara ịgọnahụ Chineke unu.”
28 Jọshụa wee gwa mmadụ niile ka ha laa, onye nke ọ bụla n’ihe nketa ya.+
29 O wee ruo mgbe ihe ndị a gasịrị na Jọshụa nwa Nọn, bụ́ ohu Jehova, nwụrụ mgbe ọ gbara otu narị afọ na iri.+
30 Ha wee lie ya n’ókèala o ketara na Timnat-sira,+ nke dị n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu, n’ebe ugwu nke Ugwu Geash.
31 Izrel wee na-efe Jehova ụbọchị niile nke Jọshụa+ nakwa ụbọchị niile nke ndị okenye dịrị ndụ mgbe Jọshụa nwụsịrị, ya bụ, ndị maara ọrụ niile Jehova rụụrụ Izrel.+
32 Ma ọ bụ na Shikem ka ụmụ Izrel liri ọkpụkpụ Josef,+ bụ́ nke ha chịịrị si n’Ijipt pụta. Ha liri ya n’ibé ala nke Jekọb zụrụ ụmụ Hemọ,+ nna Shikem, otu narị mkpụrụ ego;+ o wee bụrụ ihe nketa nke ụmụ Josef.+
33 Elieza nwa Erọn wee nwụọkwa.+ Ha wee lie ya n’Ugwu Finihas nwa ya,+ nke o nyere ya n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D6%26Chapter%3D24%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl